नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): माओवादीको जारी विस्तारित वैठक हलभित्रको माहौल प्रेम, यौन र जवानीका बिषयमा पनि केन्दि्रत छ !
माओवादीको जारी विस्तारित वैठक हलभित्रको माहौल प्रेम, यौन र जवानीका बिषयमा पनि केन्दि्रत छ !
बाहिरबाट झट्ट हेर्दा माओवादीको जारी विस्तारित वैठकमा राष्ट्रिय स्वाधिनता, सिद्धान्त, दर्शन र अबसरका कुरा भइरहेका छन र त्यसै कारण नेतृत्ववीच नै कुटाकुटको अबस्था आएको छ । तर, हलभित्रको माहौल प्रेम, यौन र जवानीका बिषयमा पनि केन्दि्रत छ । युद्धकालमा आदर्श र दर्शनका कुरा गर्दै अन्तरजातीय र अनमेलबिबाह गरेका माओवादी कार्यकर्ताको प्रेम शान्ति प्रकृया सुरु भएसँगै टुट्दो छ । स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका छोराले तीनवटा बिबाह गरिसके । पूर्व सभासद् गुणखर बस्याल कान्छी लिएर भागे, धेरै आर्दश सम्बन्धहरुले बिच्छेदको सामना गर्नुपर्‍यो ।
माओवादी कार्यकर्ताका आर्दश सम्बन्ध कसरी भत्किंदै छन भन्ने उदाहरण पूर्व लडाकू कमाण्डर कमला नहर्की नै हुन् । नीति र सिद्धान्तका चर्का कुरा गरेर कार्यकर्ताहरु कुर्सी हानाहान गरिरहँदा उनले यसरी बह र आक्रोश पोखिन । हामी महिलाहरू हिजो चुलोचौको र घर परिवार त्यागेर जनयुद्धमा होमियौँ । जनयुद्धका क्रममा महिला नेता तथा कार्यकर्ताबाट जुन प्रकारको त्याग, तपस्या, बलिदान र उत्सर्गका कीर्तिमान कायम भए, त्यसबारे मैले यहाँ भन्न जरुरी छैन । नेता कमरेडहरु र हलमा सहभागी हामी सबै त्यसबारे जानकार छौँ । तर, जब पार्टी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो तब महिला कार्यकर्ताहरू घर न घाटका भएका छन् । पार्टीलाई हामी महिला कार्यकर्ता जनयुद्ध वा संघर्षका बेलामा मात्र चाहिएको रहेछ । के नेताहरूलाई पार्टी खुला राजनीतिमा आएपछि महिला कार्यकर्ताको उपयोगिता सकिएको भन्ने लागेको हो ? यदि त्यसो हो भने हामीलाई प्रष्ट भनिदिनुस्, अझै पनि भ्रममा राख्ने प्रयास नगर्नुस् ।
Anonymous July 22, 2012 at 1:48 AM
कमला जि तपाईंको बैचारिक आक्रोश प्रती म लगायत प्राये सबै नेपालीहरु सहमत् छन जस्ले तपाईं जस्ता हजारौ बलिदान मा होमिएका महिला चेतिबेती हरु प्रती सहानुभुति प्रकट गर्दछ। वास्तब्मा वास्तविकता त्यही हो जुन तपाईंले प्रस्त देखिरहनु भएको छ। तपाईं चेलीहरुले जुन साहस् र अठोट लिएर आफ्नो चुला,चौका र घर परिवार छाडेर जनयुध्दमा होमिनु भयो त्यो सराहनिये छ र त्यो चेलीहरुको साहस् प्रती ह्रिदये देखी सम्मान गर्दछु तर ति चेलीले के पाये त? भोजपुर कि बिहानी राइ भन्नु हुन्छ:- १० बर्षाको जनयुध्दमा म लुटिए आफ्नै कम्रेड हरु बाट- सुरुमा उनिहरुले मेरो उर्बर जवानी लुटे,त्येस्पछि मेरा निर्दोश सपनाहरु लुटे, अहिले सबै लुताएर घर फर्किन लाग्दा जाबो ३ लाख को चेक् पनि लुटे, यो कर्ण प्रियाे पन्तिहरु उनै बिहानी राइ को हो जुन नेपाल न्युज बाट सभार गरिएको थियो, एस्ता उर्बर अस्मिता लुटिएका चेलीहरु वहाँ मात्रा हैनन वहाँ जस्ता धेरै छन।के यही हो त जनयुध्दको मर्म र भावना? यो त एउटा सोशण हो ,खेलौना हो जुन ग्रोउन्ड मा खेले अनी छादि दिए।त्यसैले येस्को बिशयेमा पनि कडा आवाज उठ्नु पर्छ जो जती चेलीहरु बेघर भएक्ला छन तेस्को बीशयेमा पनि कडा आवाज उठ्नु पर्छ, जहाँ सम्म अहिले सामायोजन् को कुरा छ त्यो बिल्कुल नयाँ भरना छनोउत को प्रकृया हो त्येस्तो हुनु हुँदैन समायोजन् चाहने लडाकु मित्र हरुले सो त भरना हुन पाउनु पर्छ, त्याहा कुनै प्रकारको क्रीतेरिया तोकिनु हुँदैन। यि कुराहरु हाम्रा नेता जि हरुले हल गर्दैनन तपाईं हामी आँफै लागि परेउ भने सम्मान पाइएला नत्र तपाईं हाम्रा सपना-सपना मै सिमित रहने छ।